Amakhodi Eyimfihlo we-Netflix 2021: Nakhu ukuthi Ungawavula Kanjani ama-Movie? | XperimentalHamid
Amakhodi Eyimfihlo we-Netflix 2021: Nakhu ukuthi Ungawavula Kanjani ama-Movie?
April 30, 2021 by USasha Gohar
ICovid-19 isonyakeni wayo wesibili. Izigidigidi zabantu emhlabeni wonke zinikezwa leli thuba elibuhlungu: bahlala emakhaya noma babe sengozini equkethe leli gciwane futhi mhlawumbe balisabalalise.
Ngokukhetha okulinganiselwe, abantu bakhethe ukuzivalela emakhaya abo. Futhi yilokhu wonke umuntu akutshela abanye abenza isexwayiso emoyeni.
Njengoba abantu besekhaya, badinga okuthile okubanikeza ukufana kobumnandi. Lokho kubonile ukubhaliswa kweNetflix kukhula kaninginingi.
Amakhodi Eyimfihlo we-Netflix 2021:
Ayini amakhodi we-Netflix?
Ukusebenza kwe-Netflix Secret Codes 2021:
Ungawavula kanjani ama-Movie anamakhodi ayimfihlo eNetflix?
INetflix ingumsindisi wempilo yangempela - futhi ngisho lokhu ngokweqiniso. Isizathu salokho ukuthi abantu, uma bevula le sayithi / uhlelo lokusebenza, bathambekele ekuchitheni amahora amaningi amahora kule sayithi. Kodwa ukwenza lokho kuvimbela amathuba okuphuma bayoba nesikhathi esimnandi ngaphandle lapho bengathola khona igciwane.
INetflix inkundla enezinkulungwane zama-movie nezinhlelo ze-TV - ezinye zazo zakhiqizwa yiNetflix ekuqaleni. Abantu bathande leli sayithi njenganoma iyiphi enye.
Ngama-movie amaningi nezinhlelo ze-TV kwesinye isikhathi kuba nzima ukuya kuhlobo olufunayo.
Kulokhu okuthunyelwe, ngizokhuluma ngamakhodi we-Netflix azokuholela kuhlobo lwakho olufunayo. Ngizokukhanyisela nangezindlela ongawasebenzisa ngazo la makhodi.
Inani labantu abasebenzisa iNetflix kuma-movie / imibukiso ye-TV yokulungisa liphezulu kakhulu uma liqhathaniswa nanoma yisiphi isikhathi esedlule. Akukho ukushoda kokuqukethwe kuleli sayithi. Idlale indima enkulu ekutheni abantu bamukele lesi sithangami.
Kunenqwaba yezinhlobo. Ezinye zalezi zinhlobo zifihliwe emehlweni alula abasebenzisi. Isibonelo, uma umuntu efuna ukubuka i-Musical movie, ngeke ivele kusayithi. Ukufinyelela kulokho, kunamakhodi athile afihliwe angaholela ezinhlotsheni umuntu afuna ukuzifinyelela.
Okwenzekayo, imvamisa, ku-Netflix ukuthi ubuka okuqukethwe, kuzokuvumela kuphela ukuthi ubheke ama-movie ahlobene nalolo hlobo kuphela. Ngokwenza njalo, inani lezinhlobo eziboniswa kubasebenzisi lilinganiselwe.
Lapha ungafunda esinye isihloko TikTok Imfihlo Emojis
Amakhodi enza ukusesha cishe zonke izinhlobo, kalula.
Ukufinyelela kuhlobo olufunayo, kuzodingeka ube nohlu lwamakhodi phambi kwakho. Isibonelo, uma ufuna ukuba nemibukiso yeZingane, kufanele ufake amakhodi endaweni ethile, ne-voila.
Uhlu lwamakhodi lude kakhulu. Ukuze ube nohlu ungasesha izingosi ezinikezela ngetheist.
Inhloso yalokhu okuthunyelwe ukukutshela ukuthi isici salokhu kunokukutshela amakhulukhulu wamakhodi akhona lapho.
Ama-movie nemibukiso ye-TV kuyindlela yokuphila kubantu abaningi. Ikakhulu ngezikhathi zezifo eziwumshayabhuqe, ukubaluleka kwaleli fomu lobuciko kukhuphuke kuphela.
Amakhodi ebengikhuluma ngawo esigabeni esedlule awasho lutho uma ungazi nakancane ukuwasebenzisa.
Ngakho-ke kungumsebenzi wami ukukutshela ukuthi ungawafaka kanjani la makhodi ukufinyelela izinhlobo zezifiso.
Ngakho-ke, uwasebenzisa kanjani amakhodi eyimfihlo eNetflix 2021? Icebo lokwenza lokho lilula.
Udinga ukufinyelela iwebhusayithi kwi-PC kune-app efonini yakho ephathekayo. Uma usufake ikheli lewebhu, kuzodingeka ufake ikhodi lapha.
Ekupheleni kwekheli lewebhu, kukhona 'idrama'. Ukuphela kokufanele ukwenze ukususa lokho bese ukubuyisela ngekhodi yohlobo.
Ngokwenza lokho uzomikiswa ekhasini lapho uzokhonjiswa khona zonke izigaba ezingaphansi kanye nama-movie / imibukiso ye-TV.
Amakhodi weNetflix wokuvula ama-movie azokwenza isipiliyoni sakho sokusebenzisa leli sayithi sibe mnandi kakhulu. Ngiyethemba uyakujabulela ukuhlala kwakho ekhaya!
Izigaba Ezokuzijabulisa, Okushisa-izikhotha Amathegi Ungawavula Kanjani ama-Movie Nge-Netflix Codeith Eyimfihlo ye-Netflix Amakhodi Oyimfihlo we-Netflix Amakhodi Oyimfihlo, Ukusebenza kwe-Netflix Secret Codes 2021 Imeyili kwemikhumbi
I-Anime Hay TV: Buyekeza Ku-Anime Hay TV
Isahluko sama-2966 seNdodana Emangazayo eMthethweni Novel Free Online